Sina Spandex Jacquard nanjelanjelatra lamba elastitra avo lenta ho an'ny mpanamboatra lamba yoga ary mpamatsy | Wenchang
Spandex Jacquard nanjelanjelatra lamba mihosin-kofehy avo lenta ho an'ny lamba yoga
Item No: kwc21-4081
Fitaovana ： 88% Polyester 12% Spandex
Toetra mampiavaka: anti-bakteria, elastika avo, hafadin'ny loko avo, hatsembohana, fanosorana ny hamandoana, maina vetivety, ahazoana aina, fofonaina
Ho an'ny Yoga, fampihetseham-batana, fanatanjahan-tena, karazana fanatanjahan-tena, na fampiasana isan'andro. Yoga Bra manambatra ny lamaody, ny asany ary ny fahombiazany
KATEGORIAM-pamokarana Yoga mitafy FABRIC
ITEMY NO KWC21-4081
ara-nofo 88% Polyester 12% Spandex
endri-javatra Breathable / Elasticity avo / kalitao avo
Fifadian-kanina avo lenta
Ampiasao Akanjo lomano / akanjo / akanjo fanatanjahan-tena
Fanamarinana RSG / SGS
Voalohany indrindra, azafady azafady ireto hevitra telo ireto: tenona tsotra, tenona twill, ary satin.
Tenona tsotra: Ny lamba tenona misy tenona tsotra dia antsoina hoe tenona tsotra. Izany hoe, ny kofehy vita amin'ny kofehy sy ny kofehy vita amin'ny kofehy dia mifamatotra kofehy hafa (izany hoe, ny kofehy dia 1 ambony sy 1 ambany). Ity karazan-damba ity dia miavaka amin'ny teboka marindrano maro, ny firafitra mafy orina, ny fikororohana ary ny malamalama. Ny lamba amboradara avo lenta amin'ny ankapobeny dia lamba manenona tsotra.
Twill: ny kofehy vita amin'ny kofehy sy kofehy vita amin'ny kofehy dia atambatra indray mandeha farafaharatsiny kofehy roa, izany hoe, 2 miakatra sy 1 midina na 3 miakatra ary 1 midina. Manisy teboka mifangaro hoavin'ny kofehy sy kofehy hanovana ny firafitry ny lamba, izay antsoina hoe lamba twill. Ny mampiavaka an'ity karazan-damba ity dia somary matevina izy io ary manana fahatsapana firafitra telo-refy. Misy sampana 30, sampana 40 ary 60 sampana.
Lamba satin: ny kofehy sy ny kofehy dia mifamatotra indray mandeha kofehy telo farafaharatsiny, noho izany ny tenona satin dia mahatonga ny lamba ho matevina kokoa, ka matevina kokoa ny lamba. Ny vokatra manenona satin dia lafo kokoa noho ny vokatra manenona tsotra sy kofehy vita amin'ny kofehy, ary malama ny lamba, milamina ary mamiratra. Ny tenona tsotra, ny tenona ary ny satin dia fomba telo fanao amin'ny fanenomana any an-damosina sy tenona. Tsy misy mahasamihafa manokana ny tsara sy ny ratsy eto. Samy manana ny mampiavaka azy ny tsirairay. Anisan'ireny, ny satin dia azo antoka fa ny lamba landy madio tsara indrindra.
Andao hiresaka momba ny fanomezam-boninahitra amin'ny antsipiriany.
Satin satin dia tsy maintsy manavaka foto-kevitra efatra: satin, satin strip, satin grid, satin jacquard.
Inona no karazana lamba satin? Raha ny marina, tamin'ny alàlan'ny fampidirana vao izao dia efa azonao fa ny "tenona tsotra, kofehy ary satin" dia lamba avokoa fa tsy lamba manokana.
Ny lamba satin mahazatra indrindra dia satin striped, antsoina hoe satin strip. Ny firafitra dia fanitarana tsipika marindrano (jereo ny sary). Amin'ny fampiasana ny fizotran'ny fanenomana aloha ary avy eo fandokoana, ity karazana lamba ity dia miloko mazàna amin'ny ankapobeny. Tsy mahazaka ny baolina, tsy mora manjavona.
Misy karazana satin ihany koa, antsoina hoe satin grid, izay loko matevina ihany koa ary karazana lattice (jereo ny sary).
Ny satin strips sy satin grids no akora mahazatra fandriana hotely. Tsy lafo sy lafo vidy ary azo ampiharina izy ireo. Ny satin strips sy satin grids dia ampiasaina hanamboarana kitapo ao an-trano ihany koa, saingy tsy dia malaza lavitra noho ny lamba satin jacquard izy ireo.
Lamba Jacquard: ny lamina eo amin'ny lamba dia tenona, tsy fanontana tsotra, na peta-kofehy. Rehefa manenona ny lamba, miova ny firafitry ny hena sy ny kofehy hananganana lamina iray, tsara ny isan'ireo kofehy, avo ny hakitroky ny kofehy, tsy simba izy io, tsy mihalefy ary manana fiononana tsara. Jacquard dia malaza be eny an-tsena, ary ny fandriana satin dia toa ambony sy matsiro. Mba hanavahana ny kalitaon'ny satin, ampitahao ny isa sy ny hakitroky ny kofehy.
Ny satin koa dia miresaka momba ny fanisana kofehy. Andao hiresaka momba ny fanisana aloha, izay matetika hitantsika 30, 40, 60, sns! Ohatra, ny namana sasany dia miantso azy hoe 30S ho an'ny 30, mitovy ihany izy io, tsy misy mahasamihafa azy! Ka inona marina no isa? Azoko toy izao ny hevitro:
Ny isa no fenitry ny hatevin'ny kofehy. Ohatra, landihazo iray grama dia azo atao kofehy 30 metatra 1, izany hoe kofehy 30, ary landihazo iray grama dia azo atao amin'ny kofehy 40 metatra ny halavany, izany hoe 40 kofehy; landihazo iray grama dia azo atao kofehy 60. Ny kofehy misy halavan'ny 1 metatra dia kofehy 60. Raha ny marina, arakaraka ny maha ambony ny isan'ny kofehy no mampivoatra ny kofehy. Ny manify kokoa ny kofehy dia ny manenona, ny lamba malefaka sy ahazoana aina kokoa. Na izany aza, ny lamba avo lenta dia mitaky akora (landihazo) avo lenta, ary manana takiana avo lenta ihany koa izy ireo amin'ny famokarana fikosoham-bary sy ny fanenomana lamba, ka somary avo ny vidin'ny lamba. Ny lamba miisa kofehy ambony dia tsy mety amin'ny fandriana satria manify loatra!
Fandoavam-bola: matetika isika dia manaiky T / T 30%
Fonosana: amin'ny horonam-bokatra miaraka amin'ny fantsona ao anatiny sy harona plastika any ivelany na araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
LAB DIPS maharitra 2-4 andro; Ny fitokonana dia mitaky 5-7 andro. 10-15 andro ho an'ny fivoarana santionany.
Lokon'ny loko miloko: 10-15 andro.
Famolavolana fanontana: 5-10 andro.
Ho an'ny kaomandy maika, mety ho haingana kokoa, andefaso mailaka hifampiraharaha.
Fa maninona no mifidy anay / FEIMEI?
Mividy kofehy izahay, mamokatra lamba grika ary maty na manonta, izay mahatonga ny vidin'ny fifaninanana sy ny fandefasana haingana kokoa.
Teo aloha: Ambongadin'akanjo fanatanjahan-tena Jacquard lamba sy Scrunch Butt Leggings seamless vehivavy Sexy Yoga Legging
Manaraka: Tondra-drano avo lenta tsy misy rano 100% Windbreaker manify tantera-drano mitafy haingon-kiraro mitafy haingon-tenda fitondra miangona
Lamba Custom Customable
Nylon Spandex lamba
Lamba tokana Jacquard